Kacsi La'aanta oo Ragga amaba Dumarka U Hogaamiya Murugo. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Raaxada Kacsi La'aanta oo Ragga amaba Dumarka U Hogaamiya Murugo.
Kacsi La'aanta oo Ragga amaba Dumarka U Hogaamiya Murugo.
Thursday, May 25, 2017 Bulshada , Raaxada
Bulsha:- Kacsi la’aanta (Himad la’aantu) waxaa loo aaneeyaa inuu sababo burburka qoysas badan, wuxuuna si gaar ah dhibkiisu u soo shaac baxaa marka da’da ragga ay sii waynaato. Waxaa lagu qiyaasaa inuu dhibkaan saameeyo kala bar ragga da’doodu u dhaxeyso 40-70 sano. Lambarkaasi wuxuu noqdaa 70% markii 70 sano kor loo dhaafo. Waxaa kaloo lo ogaaday in 90% raga qaba dhibkan aysan raadsan wax daawo ah iyagoo dhibkooda iska qarsada.
Waxaa kaloo keeni kara daawooyin loo qaato in lagu daweeyo cudurada qaarkood. Haddii dhibkaan aad isku aragtid waxaad u baahan tahay inaad u tagtid dhakhtar si laguu baaro ama lagaaga daaweeyo waxa keenay. Ogow dhibkan wuxuu noqon karaa calaamad cudur sida sonkorowga, dufanka dhiiga () oo badata ama dhiig-karka.